YEYINTNGE(CANADA): Thursday, October 13
Htun Aung Gyaw's Request to Thein Sein
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/13/20110အကြံပြုခြင်း
ဦးဇင်းက ယုံကြည်ချက် ဆိုတာကိုတော့ အရမ်းကြိုက်တယ်
"ဆိုင်ကယ်စီးပြ၊ ဖားခုန်ပြ ဆိုလည်း လုပ်ပေးရတယ်"
“အခုဦးဇင်းတို့ ကျိုင်းတုံက အကျဉ်းသား အယောက် ၁၄၄ဦးဇင်းတို့ တကျောင်းလုံးကို စစ်တပ်က ဝင်စီး လိုက်တယ်။ မြင်ကွင်းကတော့ ဒကာကြီးရယ်… အနိဌာရုံပါပဲ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ပင် မတူတော့ပါဘူး။ သံဃာတွေကို ဝင်စီး၊ ဆွဲထုတ်တာတွေဟာ မြင်မကောင်းဘူး။ တချို့ ကိုယ်တော်တွေဆိုရင် ဆွဲချတော့ သင်္ကန်းတွေလည်း မရှိ
တော့ဘူး။ တချို့ ဦးဇင်းလေးတွေဆို ရိုက်နှက် ပြီး တရိစ္ဆာန်လိုပဲ ဆွဲထုတ်သွားတာ ဖိနပ်မပါ သင်္ဃန်းမပါ ကိုယ်လုံးတီးတွေပါပဲ။ စစ်ကျောရေးရောက်မှ တချို့ကို မြင်ကောင်းအောင် သင်္ကန်းလေးပြန်စီးပေးတာ။
“အခုဦးဇင်းတို့ ကျိုင်းတုံက အကျဉ်းသား အယောက် ၁၄၄ ယုံကြည်ချက်နဲ့ အကျဉ်းကျနေတဲ့သူက
ဦးဇင်းရယ်၊ ဦးဝင်းဆွေ - အင်းစိန် NLD၊ ဦးသုတဉာဏ(ခေါ်) ဦးသန်းဇော်၊ သူလဲ ဘုန်းကြီးပဲ။ ကိုစိုးမင်းဦး
ရွှေပြည်သာ NLD လူငယ်အဖွဲ့ကရယ်ပဲ ပါပါတယ်။ အထဲမှာရွှေဝါရောင်တုန်းက ကျတဲ့ သံဃာ လေးပါး ကျန်နေခဲ့
နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာအတိုက်အခံအဖွဲ့တွေကယုံကြည်ချက် ကြောင့် အကျဉ်းကျနေကြတဲ့ သံဃာတော်တွေနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို လွှတ်ပေးဖို့ မကြာခဏ တိုက်တွန်း ပြောဆိုပေမယ့်လည်း မြန်မာအစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မရှိပါဘူးလို့ ကာကွယ်ပြောဆိုနေတာ တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး။
“အကုန်လုံးပါပဲဗျာ။ ထောင်ထဲမှာက အပြင်လောကနဲ့က တခြားစီပဲဗျာ။ အပြင်မှာ ဘုန်းကြီးများစွာက ဟင်းလေး အဆင်ပြေပြေ စားနေရပေမယ့် ထောင်ထဲမှာက တာလဘောနဲ့ ပြီးနေခဲ့ရတဲ့ ရက်တွေက အများကြီးပဲလေ။ ကျုပ်
ဆိုရင်ဗျာ နေတော့ အညာသား၊ မုံရွာသား။ နေတော့ ရန်ကုန်၊ ပို့တော့ ကျိုင်းတုံဆိုတော့ ကဲဘယ်နှယ့်လုပ်ကြမတုန်း။ မိသားစုက ဘယ်လိုလာမတုန်း၊ ဘယ်လိုလုပ် အဆင်ပြေမတုန်း ဒါတွေရှိတာပေါ့ဗျာ”
Statements from Canada Foreign Minister on release of Political Prisoners in Burma
Statements from Canada Foreign Minister and Chair of the Parliamentary Friends of Burma on release of Political Prisoners in Burma
Statement by Minister Baird on Situation in Burma
(No. 301 - October 13, 2011 - 4:20 p.m. ET) Foreign Affairs Minister John Baird today issued the following statement in response to the announced prisoner amnesty and the release ofanumber of political prisoners, in Burma:
“Canada welcomes news thatanumber of political prisoners in Burma were released this week. Along with international allies, Canada has repeatedly lobbied on behalf of these prisoners.
“When I met with my Burmese counterpart, Foreign Minister Wunna Maung Lwin, in July, I stressed that his government must demonstrate its commitment to reform through concrete actions. Today’s announcement marksastep forward, and the Government of Canada encourages the Burmese authorities to continue on this path.
“We note thatasignificant number of political prisoners remain in detention, and we continue to call for their prompt and unconditional release. Sustained action is required by the Burmese authorities to uphold and protect democracy, human rights, fundamental freedoms and the rule of law for all Burmese people, including ethnic and religious minorities.
“Canada will continue to support those working to promote respect for human rights andatransition to genuine democracy in Burma. We will be monitoring the situation closely. We urge the authorities to engage in inclusive dialogue with opposition and ethnic groups, and to fully investigate allegations of human rights abuses by government or military personnel.”
Karygiannis welcomes release of 200 Burmese Political Prisoners
OTTAWA – The Honourable Jim Karygiannis, Member of Parliament for Scarborough-Agincourt, and Liberal Multiculturalism Critic, welcomed the release of nearly 200 Burmese political prisoners as part ofageneral Government amnesty which released 6,000 prisoners in total.
“I am pleased that the Burmese Government has released these men and women.” said Mr. Karygiannis. “I trust that this amnesty will translate into real freedom for these political prisoners and that they will be able to continue to work forafree and democratic Burma.”
Many of the political prisoners were jailed for criticizing the military government of Burma and advocating for democratic reform in Burma. There are approximately 2,000 political prisoners in Burmese jails.
“As Chair of the Parliamentary Friends of Burma, I am hoping that the release of these prisoners, together with the moves to relax media censorship and allow the formation of labour unions, is the beginning ofareturn to democracy in Burma.” Mr. Karygiannis stated. “Canadians stand ready to help the people of Burma as they work toward democracy.”
Margot Doey-Vick, Media Relations
Office of the Hon. Jim Karygiannis, P.C., M.P.
13 Oct 2011 Yeyintnge's Diary
ပြည်ပ သီးလေးသီးအဖွဲ့ ဇာဂနာနှင့် တိုင်ပင်ပြီး ပြည်တော်ပြန်မည်
အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက်။ စောခါးစူး (ကေအိုင်စီ)
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျန်ရှိနေသေးသည့် သီးလေးသီးအဖွဲ့မှ ပန်းသီး၊ ကြယ်သီးနှင့် အငြိမ့်မင်းသမီး မြစပယ်ငုံ(မီးမီး)တို့သည် ထောင်မှ လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်သည့် ဟာသ သရုပ်ဆောင် ဇာဂနာနှင့် တိုင်ပင်ပြီး ပြန်တော်ပြန်မည်ဟု ယနေ့ ပြောကြား လိုက်သည်။
၎င်းတို့၏ ဆရာဇာဂနာ အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာမှသာ မြန်မာပြည်ပြန်မည် ဖြစ်ကြောင်း သီးလေးသီးခေါင်းဆောင် ဂေါ်ဇီလာ အပါအ၀င် စိန်သီး၊ ဇီးသီးနှင့် အငြိမ့်မင်းသမီး ချောစုမျိုးတို့ ပြီးခဲ့သည့်လ ၁၁ရက်နေ့က ပြန်ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် ကျန်ခဲ့သူ သီးလေးသီးအဖွဲ့ဝင်များက မှတ်ချက်ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကိုသူရ(ဇာဂနာ) လွှတ်ပြီဆိုတော့ သူနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကျနော်တို့တွေ မြန်မာပြည်ပြန်မယ်။ မနေ့က စကားပြောဖြစ်ပေမယ့် သူ အလုပ်များနေတော့ ပြန်မယ့်ကိစ္စ မတိုင်ပင်ဖြစ်သေးဘူး။”ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် လူရွှင်တော် ပန်းသီးက ကေအိုင်စီသို့ ပြော သည်။
မြန်မာအစိုးရက လက်တလော မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေးကိစ္စကို ဂုဏ်ပြတဲ့အနေဖြင့် ယခုလ ၃၀ရက်နေ့တွင် ချင်းမိုင်မြို့၌ ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခု ကျင်းပရန်ရှိသည့်အတွက် ရုတ်တရက် ပြန်မည်မဟုတ်သေးဟုလည်း သူက ဖြည့်စွက်ပြောဆို သည်။
ထို့အပြင် ပြည်တော်ပြန်ရေးကိစ္စ တိုင်ပင်ပြီးပါက မည်သည့်နေ့ရက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထွက်ခွါရန် ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဟု သူက ရှင်းပြသည်။
ဇာဂနာသည် ထောင်မှ ပြန်လွှတ်လာပြီး နာရီပိုင်းအကြာ ချင်းမိုင်တွင် ကမည့် ဖျော်ဖြေပွဲအကြောင်း ဆက်သွယ်စကားပြောပြ သည့်အခါ ပြက်လုံးတချို့ကို ၎င်းတို့အား အကြံပေးခဲ့သေးသည်ဟုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် သီးလေးသီးက ပြောသည်။
သီးလေးသီးအဖွဲ့ကို ၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံကျော် ဟာသသရုပ်ဆောင် ကိုဇာဂနာက ဦးဆောင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည်။
တည်ထောင်ပြီးနောက် နိုင်ငံရေး သရော်သည့် ပြက်လုံးများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြုလုပ်လာသည့်အတွက် အစိုးရ၏ သတိပေး ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
၎င်းအဖွဲ့သည် ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ပြင်ပနိုင်ငံသို့ ထွက်လာပြီး မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ကိုးရီးယား၊ ဂျပန်၊ အမေရိကန် တို့တွင် သွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ထို့နောက် မြန်မာပြည် မပြန်ဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်ကာ အနုပညာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။
ထိုင်း​ရောက် မြန်မာအလုပ်သမား​နှစ်သန်း​ မှတ်ပုံတင်​ရေး​ အလုပ်သမား​ ဒု-ဝန်ကြီး​နှင့်​ ​မေး​မြန်း​ချက်
Published on October 13, 2011 by ​အေး​နိုင်
မြန်မာအလုပ်သမား​ ဒု-ဝန်ကြီး​ ဦး​မြင့်​သိန်း​ ဦး​ဆောင်တဲ့​ မြန်မာကိုယ်စား​လှယ်အဖွဲ့​ဟာ ထိုင်း​နိုင်ငံမှာ​ရောက်ရှိ​နေပြီး​ ထိုင်း​နိုင်ငံ​ရောက် မြန်မာလုပ်သား​အား​လုံး​ ယာယီမှတ်ပုံတင်ကတ် ထုတ်​ပေး​နိုင်​ရေး​ ထိုင်း​အစိုး​ရနဲ့​ ​ဆွေး​နွေး​နေပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်အရ မြန်မာတာဝန်ရှိသူ​တွေက ထိုင်း​နိုင်ငံကို သွား​ရောက် လုပ်ကိုင်​ပေး​မယ့်​ စနစ်ဖြစ်တယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့​အပြင် အလုပ်လုပ်ခွင့်​ ကန်ထရိုက် သက်တမ်း​ကုန်တဲ့​အခါ အလုပ်ဆက်လုပ်ခွင့်​ရ​ရေး​၊​ အလုပ်သမား​အခွင့်​အ​ရေး​ စတာ​တွေကို ထိုင်း​တာဝန်ရှိသူ​တွေနဲ့​ ​ဆွေး​နွေး​နေတယ်လို့​ ဒု-ဝန်ကြီး​က ​ပြောပါတယ်။
ပြည်တွင်း​မှာလည်း​ အလုပ်သမား​အဖွဲ့​အစည်း​ ဥပ​ဒေကို အစိုး​ရက တမြန်​နေ့​က အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်လို့​ အလုပ်သမား​တွေ လွတ်လွပ်လပ်လပ် အသင်း​အပင်း​ ဖွဲ့​စည်း​လှုပ်ရှား​ခွင့်​ ရ​နေပြီလို့​ ဝန်ကြီး​ ဦး​မြင့်​သိန်း​က ​ပြောပါတယ်။
အလုပ်သမား​ဝန်ကြီး​ဌာန ဒု-ဝန်ကြီး​ဟာ ဘန်​ကောက်မြို့​ မဟာချိုင်​ဒေသက မြန်မာအလုပ်သမား​အ​ရေး​ ​ဆောင်ရွက်​နေသူ​တွေကိုလည်း​ ​တွေ့​ဆုံသွား​ပါတယ်။
အလုပ်သမား​အ​ရေး​ကိစ္စ​တွေနဲ့​ ပတ်သက်လို့​ အလုပ်သမား​ဒုဝန်ကြီး​ ဦး​မြင့်​သိန်း​ကို ဆက်သွယ်​မေး​မြန်း​ချက်။
ထိ်ုင်း​နိ်ုင်ငံကို ဘာအတွက်လာရလဲဆိုတာ အကျဉ်း​ချုပ် ​ပြောပြ​ပေး​ပါ။
“ပြည်ပ​ရောက် အလုပ်သမား​အများ​စုဟာ ထိုင်း​နိုင်ငံမှာ အများ​ဆုံး​ရောက်ရှိ​နေတယ်။ သမ္မတကြီး​ မိန့်​ခွန်း​အဖွင့်​မှာလည်း​ ​ပြောခဲ့​တယ်။ ပြည်ပ​ရောက် မြန်မာအလုပ်သမား​တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး​ ကူညီ​စောင့်​ရှောက်​ပေး​ရမယ်။ ဒါ တိုင်း​ပြည်ရဲ့​ ဖွံ့​ဖြိုး​မှု၊​ အင်အား​ပဲလို့​ ​ပြောထား​တာရှိပါတယ်။ အခု ပြည်ပအလုပ်အကိ်ုင်​ကော်မတီဆိုတာကို အလုပ်သမား​ဝန်ကြီး​က ဥက္ကဋ္ဌ၊​ နယ်စပ်​ရေး​ရာဝန်ကြီး​က ဒု- ဥက္ကဋ္ဌ၊​ ​ကော်မတီမှာ ကျ​နော်က အတွင်း​ရေး​မှူး​။ ဖွဲ့​စည်း​ပြီး​ရင်​တော့​ နှစ်နိုင်ငံ ယာယီနိုင်ငံကူး​လက်မှတ်​တွေ အမြန်ဆုံး​ လုပ်​ပေး​နိ်ုင်​အောင်၊​ နိုင်ငံသား​တွေ စိစစ်နိုင်​အောင် ညှိနှိုင်း​တဲ့​ အစည်း​အ​ဝေး​လေး​ စီစဉ်ရင်း​နဲ့​ အလုပ်သမား​တွေ အများ​ဆုံး​ရှိတဲ့​ မဟာချိုင်က အလုပ်သမား​တွေကို လာ​တွေ့​တာပါ။”
အခုခရီး​စဉ်ဟာ ထိ်ုင်း​နိုင်ငံမှာရှိတဲ့​ မြန်မာအလုပ်သမား​တွေအကြား​ အသစ်အဆန်း​ဖြစ်​နေသလို ထိ်ုင်း​ရောက်​နေတဲ့​ မြန်မာ​တွေအတွက် လုပ်ငန်း​ခွင်နစ်နာမှု​တွေ လခကို သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း​ မရတာ​တွေနဲ့​ပတ်သက်ပြီး​ ဝန်ကြီး​တို့​အ​နေနဲ့​ အနိမ့်​ဆုံး​အဆင့်​ ဘယ်​လောက်ထိ ကုစား​ပေး​နိုင်မလဲ။
“ကျ​နော်တို့​ လိုအပ်​နေတဲ့​အဆင့်​တွေက​တော့​ သူ့​အဆင့်​အတိုင်း​ဆို နည်း​နည်း​လေး​ အ​ခြေခံအဆင့်​တွေ ရှိ​သေး​တယ်။ ဘာလို့​လဲဆို​တော့​ အ​ထောက်အထား​ မရှိ​သေး​တဲ့​ သူ​တွေကို အ​ထောက်အထား​ ရဖို့​က အမြန်လုပ်ရမှာက ပထမ အ​ရေး​အကြီး​ဆုံး​ဖြစ်တယ်။ အ​ထောက်အထား​ရပြီး​တဲ့​ ​နောက်ပိုင်း​မှာ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား​ ပြဿနာ​တွေနဲ့​ နစ်နာဆုံး​ရှုံး​မှု​တွေကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်း​တွေနဲ့​ ညီ​အောင် လုပ်​ပေး​ရမယ့်​ဥစ္စာက​တော့​ ​နောက်ပိုင်း​ ဆက်တိုက်လုပ်ရမယ့်​ ပြဿနာ​တွေပါပဲ။”
ထိုင်း​မှာ​ရောက်​နေတဲ့​ အလုပ်သမား​ ၂ သန်း​လောက်က မှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံအတွက် ဝင်​ငွေဘယ်​လောက်ထိ​အောင် ရနိုင်တယ်လို့​ ဝန်ကြီး​တို့​ ခန့်​မှန်း​ထား​ပါသလဲ။
“အခုလည်း​ပဲ သူတို့​ ထိုင်း​နိုင်ငံ​ရောက်​နေတဲ့​ အလုပ်သမား​တွေက ပြည်တွင်း​ကို သူတို့​နည်း​သူတို့​ဟန်နဲ့​ ​ငွေ​တွေလွှဲ​နေတာပဲ​လေ။ ဒါလည်း​ တိုင်း​ပြည်ကို ​ငွေ​တွေ စီး​ဆင်း​နေတာ။ အဲဒီ​တော့​မှ တကယ့်​ကို တရား​ဥပ​ဒေလမ်း​ကြောင်း​က​နေ စီး​ဆင်း​လာရင်​တော့​ ပို​ကောင်း​တာ​ပေါ့​။ အခုအ​နေအထား​က​တော့​ ကြား​မှာ အလိမ်ခံရတာတို့​၊​ အ​ဖျောက်ခံရတာတို့​၊​ ဒီလိုပြဿနာ​တွေလည်း​ ရှိ​တော့​ အဲဒါ​တွေကို ကျ​နော်တို့​က လုံခြုံ​အောင်လို့​ လုပ်​ပေး​ချင်တဲ့​ အ​နေအထား​ပါပဲ။ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့​ပဲ စီး​ဆင်း​နေပါ​စေ တိုင်း​ပြည်အတွက် ​ငွေက​တော့​ စီး​ဝင်​နေတာဖြစ်ပါတယ်။”
ပြည်တွင်း​မှာလည်း​ အလုပ်သမား​တွေက သမဂ္ဂ​တွေ ထူ​ထောင်ချင်ကြတယ်။ ဒီလိုထူ​ထောင်ဖို့​ အခွင့်​အလမ်း​လည်း​ ဒီမိုက​ရေစီ နိုင်ငံမှာရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုက​ရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီလို့​ ဝန်ကြီး​တို့​ဘက်က ​ပြော​နေ​တော့​ အလုပ်သမား​သမဂ္ဂ​တွေ ထူ​ထောင်​ရေး​က ခွင့်​ပြုသင့်​ပြီ မဟုတ်လား​။
“ခွင့်​ပြုထား​ပါပြီ။ ကျ​နော်တို့​ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​တ​နေ့​က အလုပ်သမား​အဖွဲ့​အစည်း​ ဥပ​ဒေကို သမ္မတကြီး​ လက်မှတ်ထိုး​လိုက်ပါပြီ။ နှစ်ပတ်အတွင်း​မှာ အဲဒီဥပ​ဒေက အတည်ဖြစ်သွား​ပါပြီ။ အဲဒီကျရင် အလုပ်သမား​အဖွဲ့​အစည်း​တွေ စနစ်တကျ ဖွဲ့​စည်း​လို့​ရသွား​ပါပြီ။”
ဒါဆိုရင် ပြည်ထဲ​ရေး​ဝန်ကြီး​ဌာနမှာ မှတ်ပုံတင်ရမှာ​ပေါ့​။
“ဟုတ်ပါတယ်။ ပြည်ထဲ​ရေး​မှာ မှတ်ပုံတင်တယ်ဆိုတာထက် အ​ယောက် ၃၀ ရှိတယ်ဆိုရင် သူတို့​သ​ဘောနဲ့​သူတို့​ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖွဲ့​စည်း​ပိုင်ခွင့်​ရှိပါတယ်။”
အလုပ်သမား​သမဂ္ဂ​တွေ ဖွဲ့​တဲ့​နေရာမှာ အလုပ်ရှင်​တွေ၊​ အလုပ်သမား​တွေနဲ့​ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိတဲ့​သူ​တွေ စက်ရုံပိုင်ရှင်​တွေ စကား​ပြောတာက​တော့​ တဆင့်​ပေါ့​၊​ ​နောက်တဆင့်​က သူတို့​ရဲ့​လိုလား​ချက်​တွေကို ထုတ်​ဖော်ပြီး​တော့​ ပွင့်​ပွင့်​လင်း​လင်း​ ​ဝေဖန်​ပြောဆိုတာ​တွေကို ဝန်ကြီး​တို့​ဌာန​တွေက ခွင့်​ပြုပါသလား​။
“လုပ်ခွင့်​ရှိပါတယ်။ အဲဒီဟာကို ရည်ရွယ်ပြီး​တော့​ ကျ​နော်တို့​က အလုပ်သမား​တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖွဲ့​စည်း​ခွင့်​ပေး​တယ်ဆိုတာ သူတို့​ရဲ့​ ရပိုင်ခွင့်​တွေ၊​ သူတို့​ရဲ့​ ​တောင်း​ဆိုပိုင်ခွင့်​တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ​တောင်း​ဆိုနိုင်​အောင်လို့​ ပိုပြီး​ရည်ရွယ်တာပါ။ အရင်ကလည်း​ ​တောင်း​ဆိုပိုင်ခွင့်​တွေ ရှိပါတယ်။ အခုက​တော့​ နိုင်ငံတကာစံနှုန်း​နဲ့​ညီပြီး​တော့​ ပိုပြီး​တော့​ ညီ​အောင် လုပ်​ပေး​လိုက်တဲ့​သ​ဘောပါ။ ပြည့်​စုံချင်တဲ့​သ​ဘောပါပဲ။”
သမ္မတဦး​သိန်း​စိန် အစိုး​ရလက်ထက်မှာ တပ်မ​တော်အစိုး​ရလက်ထက်နဲ့​ ကွဲပြီး​ထွက်လာတဲ့​ မူအကျင့်​တွေလို့​ ​ပြောလို့​ရတာ​ပေါ့​။
“ဒီဟာက​တော့​ ကျ​နော်တို့​ ဒီမိုက​ရေစီအစိုး​ရလက်ထက်မှာ​တော့​ သမ္မတကြီး​တို့​က တကယ့်​ကို ပီပီပြင်ပြင် လုပ်​နေတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား​တို့​ သိ​နေတာပဲ။ အခုက နိုင်ငံတကာစံနှုန်း​တွေနဲ့​မီ​အောင် အမြန်ဆုံး​အ​ကောင်အထည် ​ဖော်သွား​မယ်ဆိုတာ​တော့​ ဒါက​တော့​ ဘာမှလွဲမှား​စရာအ​ကြောင်း​ မရှိပါဘူး​။”
ဝန်ကြီး​ရဲ့​ ထိုင်း​နိုင်ငံခရီး​စဉ်အတွင်း​မှာ ​ဆွေး​နွေး​ပွဲ​တွေက​နေ အချုပ်အား​ဖြင့်​ ရည်မှန်း​ထား​တဲ့​ရလဒ် ဘယ်​လောက်ထိ​အောင် ​ပေါက်​မြောက်မလဲ။ အဲဒါ​လေး​ နည်း​နည်း​ရှင်း​ပြ​ပေး​ပါ။
“အခု ထိုင်း​အစိုး​ရအသစ်ကလည်း​ ​တော်​တော်​လေး​ကို စိတ်​စေတနာ ​ကောင်း​ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျ​နော်တို့​ အလုပ်သမား​တွေရဲ့​ နိုင်ငံသား​စိစစ်တာတို့​၊​ ယာယီနိုင်ငံကူး​လက်မှတ် ထုတ်​ပေး​တာတို့​ကို ဒီနိုင်ငံထဲထိ ဝင်ပြီး​တော့​ လုပ်​ပေး​နိုင်​အောင်လို့​ လာညှိတာပါ။ ​အောင်မြင်ဖို့​များ​ပါတယ်။ ​နောက်တချက်က ကျ​နော်တို့​ ခုန​ပြောတဲ့​ ဗီဇာခ ​လျှော့​ချဖို့​ကိစ္စတို့​၊​ ​နောက်ဆုံး​အ​ခြေအ​နေအရဆိုရင် အခု​ရေကြီး​တဲ့​အချိန်မှာ ကျ​နော်တို့​ အလုပ်သမား​တွေ ​ရေ​ဘေး​ဒုက္ခ ဖြစ်​နေတာကို လည်း​ ထိုင်း​အစိုး​ရက​နေ အကူအညီ​ပေး​ဖို့​၊​ သူတို့​ကို ​မေတ္တာရပ်ခံထား​ပါတယ်။ သူတို့​လည်း​ ကူညီ​ပေး​မယ်လို့​ ​ပြောပါတယ်။”
အခု ထိုင်း​နိုင်ငံမှာ ဝန်ကြီး​ချုပ်ယင်လတ်အစိုး​ရက အနိမ့်​ဆုံး​လုပ်အား​ခ ဘတ် ၃၀၀ ဆိုပြီး​ သတ်မှတ်တယ်။ ထိုင်း​ဥပ​ဒေအရဆိုရင် ထိုင်း​အလုပ်သမား​နဲ့​ မြန်မာအလုပ်သမား​က လစာအား​ဖြင့်​ ညီတူညီမျှ ခံစား​ရမယ်လို့​ပြောတယ်။ အဲဒီ​တော့​ အခု​လော​လောဆယ်မှာ ဘတ် ၃၀၀ လို့​ မသတ်မှတ်​သေး​ပေမယ့်​ မဲ​ဆောက်လို​နေရာမျိုး​မှာ အနိမ့်​ဆုံး​လုပ်အား​ခ တရက် ၁၆၅ ဘတ်လို့​ သတ်မှတ်​ပေမယ့်​လည်း​ မြန်မာလုပ်သား​တွေက ၆၅ ဘတ်​လောက်ပဲရတာ ​တွေ့​ရတယ်။ ဒီကိစ္စ​တွေကို ဝန်ကြီး​တို့​ အနီး​ကပ်​ပြောဆိုတာ ရှိလား​ခင်ဗျာ။
“လစာ​တွေနဲ့​ပတ်သက်လို့​ လက်ရှိကိုပဲ ကျ​နော်တို့​ဆီက အလုပ်သမား​သစ်​တွေ သူတို့​နဲ့​ ညှိပြီး​လွှတ်​နေတဲ့​ ကိစ္စမှာ အနည်း​ဆုံး​ ဘတ် ၂၀၀ စပြီး​ရ​နေပါပြီ။ အဲဒါ​တွေက အလုပ်ရှင်-အလုပ်သမား​ ကန်ထရိုက် လက်မှတ်ထိုး​ပြီး​မှ လွှတ်တာဖြစ်တဲ့​အတွက် ရတယ်ဆိုတာ ​သေချာပါတယ်။ ​နောက်ပိုင်း​ကျရင်လည်း​ သူတို့​ ဘတ် ၃၀၀ သတ်မှတ်တဲ့​အတိုင်း​ တိတိကျကျ မရ​သေး​တောင် တဖြည်း​ဖြည်း​နဲ့​ မြင့်​ပြီး​ရလာဖို့​ အလား​အလာ​ကောင်း​ပါတယ်။ ကျ​နော်တို့​ အချင်း​ချင်း​လည်း​ ဒါ​တွေလည်း​ ​ပြောပါတယ်။ ကန်ထရိုက်စာချုပ်ပြီး​ရင်လည်း​ တနှစ်ချုပ်လား​၊​ တနှစ်ခွဲချုပ်လား​၊​ အဲဒီကန်ထရိုက်စာချုပ် ပြီး​ရင်လည်း​ အလုပ်​တွေ ​ရွှေ့​ပြောင်း​ပြီး​တော့​ လုပ်နိုင်ဖို့​လည်း​ ညှိခဲ့​ပါတယ်။”
ထိုင်း​မှာ​ရောက်တဲ့​ မြန်မာအလုပ်သမား​ ၂ သန်း​ထက်​တောင် ပိုနိုင်တယ်လို့​ သိရပါတယ်။ ထိုင်း​ရောက်​နေတဲ့​ မြန်မာအလုပ်သမား​ ၂ သန်း​ကို ဝန်ကြီး​အ​နေနဲ့​ အသံလွှင့်​ဌာနကတဆင့်​ သူတို့​အတွက် အား​ရ​ကျေနပ်စရာ တခုခု ​ပြောပြ​ပေး​ပါလား​။
“အဲဒီဟာက​တော့​ တခြား​မဟုတ်ပါဘူး​။ ကျ​နော်တို့​ လာညှိတဲ့​ကိစ္စ​တွေက ထိုင်း​နိုင်ငံမှာ အများ​ဆုံး​ရောက်​နေပြီး​တော့​ ကျ​နော်တို့​တိုင်း​ပြည်အတွက် တနည်း​တလမ်း​အား​ဖြင့်​ သူတို့​က အ​ထောက်အကူ အကျိုး​ပြု​နေတာပဲ။ ​ဘေး​အန္တရာယ် ကင်း​ကင်း​ရှင်း​ရှင်း​နဲ့​ လုပ်နိုင်ဖို့​အတွက် နိုင်ငံတကာစံနှုန်း​တွေနဲ့​ ​လျော်ညီ​အောင် လုပ်နိုင်ဖို့​အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး​တော့​ လာညှိနှိုင်း​ပါတယ်။ ဒါ​တွေက​တော့​ ​အောင်မြင်ဖို့​က ရာနှုန်း​ပြည့်​နီး​ပါး​ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မကြာခင်မှာ ထိုင်း​နိုင်ငံထဲထိ ကျ​နော်တို့​ နိုင်ငံကူး​လက်မှတ်နဲ့​ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ရေး​ ကိစ္စ​တွေကို လာ​ရောက်​ဆောင်ရွက်ပြီး​တော့​ အကာအကွယ်​ပေး​သွား​မယ်ဆိုတဲ့​ အ​ကြောင်း​ကို ​ပြော​ပေး​ပါ။”
“​ကျေး​ဇူး​တင်ပါတယ်။ မြန်မာအလုပ်သမား​တွေနဲ့​ ​တွေ့​ရတာ ဝမ်း​လည်း​သာပါတယ်။”
လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​တိုက်ပွဲဝင် ဘုန်း​တော်ကြီး​ ဒလိုင်း​လား​မား​
လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​တိုက်ပွဲဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များ​ အပိုင်း​ (၁၁)
Published on October 11, 2011 by ခင်​မောင်စိုး​ · 1 Comment
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ​ ဒီမိုက​ရေစီအ​ရေး​အတွက် ငြိမ်း​ချမ်း​စွာလှုပ်ရှား​နေသူများ​ကို ကျွန်ုပ် ​ထောက်ခံအား​ပေး​ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုလှုပ်ရှား​သူများ​နှင့်​ တစိတ်တဝမ်း​တည်း​ ​သွေး​စည်း​ညီညွတ်​နေပြီး​ လွတ်လပ်​ရေး​နှင့်​ ဒီမိုက​ရေစီအ​ရေး​အတွက် ​တောင်း​ဆိုမှုကို အား​ပေး​ထောက်ခံပါသည်။ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုး​သော ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသား​အား​လုံး​က အကြမ်း​မဖက်သည့်​ လှုပ်ရှား​မှုအ​ပေါ် ​ထောက်ခံ အား​ပေး​ကြပါဟုလည်း​ ကျွန်ုပ် ​ပြောလိုပါသည်။ ထို့​ပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း​ ဒီမိုက​ရေစီနှင့်​ လွတ်လပ်​ရေး​အတွက် ပါဝင်လှုပ်ရှား​နေကြ​သော ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်း​သံဃာ အ​မြောက်အမြား​ကို ​လေး​စား​မြတ်နိုး​ ကြည်ညိုလှပါ​ကြောင်း​ ​ပြောကြား​လိုပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်​သော မြန်မာစစ်အစိုး​ရအ​နေဖြင့်​ ​မေတ္တာတရား​ အကြမ်း​မဖက်​ရေး​ တရား​တော်များ​နှင့်​အညီ ​ဆောင်ရွက်ပါဟု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်း​တော်ကြီး​တပါး​ဖြစ်သည့်​ မိမိအ​နေဖြင့်​ ​မေတ္တာရပ်ခံလိုပါသည်။
ဒါက​တော့​ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဩဂုတ်လနဲ့​ စက်တင်ဘာလများ​အတွင်း​ ဖြစ်ပွား​ခဲ့​တဲ့​ ရဟန်း​သံဃာများ​ ဦး​ဆောင်တဲ့​ ပြည်သူ့​ဆန္ဒပြပွဲများ​ကို ကမ္ဘာ့​မီဒီယာများ​က​နေတဆင့်​ ကြား​သိ ​တွေ့​မြင်ရပြီး​တဲ့​နောက်မှာ ကမ္ဘာ​ကျော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်း​တော်ကြီး​တပါး​က ထုတ်ပြန်​ရေး​သား​လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်း​ချမ်း​ စွာဆန္ဒပြတဲ့​ ရဟန်း​သံဃာများ​ကို မြန်မာစစ်အစိုး​ရက ရိုက်နှက်ဖြိုခွင်း​နေတာကို မြင်ရကြား​ရတဲ့​အခါမှာ သူ့​ဇာတိနိုင်ငံက ဘုန်း​ကြီး​ရဟန်း​များ​ကိုလည်း​ တရုတ်အာဏာပိုင်​တွေက ရိုက်နှက်ဖြိုခွင်း​ခဲ့​တာကို ချက်ချင်း​ ပြန်သတိရသွား​ပါတယ်လို့​ ဘုန်း​တော်ကြီး​ကပဲ မကြာခင်က ထပ်မံ​ပြောကြား​လိုက်ပါ​သေး​တယ်။
ကမ္ဘာ​ ကျော်ဘုန်း​တော်ကြီး​က​တော့​ တိဗက်နိုင်ငံလွတ်​မြောက်​ရေး​အတွက် နှစ်​ပေါင်း​များ​စွာ တိုက်ပွဲဝင်​နေခဲ့​တဲ့​ ၁၄ ပါး​မြောက် ဒလိုင်လား​မား​ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်း​တော်ကြီး​ဒလိုင်လား​မား​ဟာ တိဗက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​များ​ရဲ့​ လွတ်လပ်​ရေး​နဲ့​ ဒီမိုက​ရေစီအ​ရေး​အတွက် ဦး​ဆောင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့​တာ နှစ်​ပေါင်း​ ၅၀ ဝန်း​ကျင်ရှိပါပြီ။ သည်အတွက်ပဲ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​နိုဘယ်လ်ဆုကို ချီး​မြှင့်​ပေး​အပ်ခြင်း​ ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုန်း​ တော်ကြီး​ ဒလိုင်း​လား​မား​ဟာ ၁၉၃၅ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၆ ရက်​နေ့​မှာ ​မွေး​ဖွား​သူ ဖြစ်ပါတယ်။ တိဗက်နိုင်ငံ အ​ရှေ့​မြောက်​ဒေသက ​ကျေး​ရွာ​လေး​တရွာမှာ လယ်သမား​မိသား​စုက ​မွေး​ဖွား​လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၃၃ ခုနှစ်အတွင်း​မှာ ပျံလွန်​တော်မူခဲ့​တဲ့​ ၁၃ ပါး​မြောက် ဒလိုင်လား​မား​ဝင်စား​တယ်လို့​ သူ့​ကို သတ်မှတ်ပြီး​ သူ့​အသက် ၅ နှစ်သား​မှာ ၁၄ ပါး​မြောက် ဒလိုင်လား​မား​အဖြစ် နန်း​တင်​ပေး​တာ ခံရပါတယ်။ ဒလိုင်လား​မား​ဆိုတာ တိဗက်နိုင်ငံရဲ့​ နိုင်ငံ​ရေး​နဲ့​ ဘာသာ​ရေး​ဆိုင်ရာ အကြီး​အကဲဖြစ်ပါတယ်
နိုင်ငံ​ တော်အကြီး​အကဲဖြစ်​ပေမယ့်​ စည်း​စိမ်ယစ်​နေရတဲ့​ ဘဝမျိုး​ မဟုတ်ပါဘူး။​ သူဟာ နန်း​တက်ပြီး​နောက် ၆ နှစ်သား​အရွယ်ကစပြီး​ ဒလိုင်လား​မား​တို့​ တတ်အပ်တဲ့​ အသိပညာ အတတ်ပညာများ​ကို စတင် သင်ကြား​တာဟာ အသက် ၂၅ နှစ်ထဲ​ရောက်တဲ့​ ၁၉၅၉ ခုနှစ် မှ ပြီး​ဆုံး​ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတရား​တော်ဆိုင်ရာ ပါရဂူဘွဲ့​ကို ရရှိခြင်း​ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပါရဂူဘွဲ့​ဟာ လွယ်လွယ်ရတဲ့​ ဘွဲ့​မျိုး​ မဟုတ်ဘူး​ဆိုတာ သူ​ဖြေဆိုရတဲ့​ စာ​မေး​ပွဲကို ကြည့်​ရင် သိသာပါတယ်။ ​နောက်ဆုံး​ စာ​မေး​ပွဲကို ​ဖြေဆိုရတဲ့​နေ့​ မနက်ပိုင်း​မှာ တက္က​ဗေဒပညာရပ်နဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​​ ပညာရှင်​ပေါင်း​ ၃ဝ ရဲ့​ ​မေး​မြန်း​မှုကို ​ဖြေဆိုရပါတယ်။ မွန်း​လွဲပိုင်း​မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတရား​တော်လာ မဇ္ဈိမပဋိပဒါ အလယ်အလတ် ကျင့်​စဉ်အ​ကြောင်း​ကို ပညာရှင် ၁၅ ဦး​နဲ့​ အ​ခြေအတင် ​ပြောဆိုရပါတယ်။ ည​နေပိုင်း​မှာ ဝိနည်း​ အဘိဓမ္မာနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ ပညာရှင် ၃၅ ဦး​က ​မေး​မြန်း​စစ်​ဆေး​ပါတယ်။ ဒီလို ပညာရှင်​ပေါင်း​များ​စွာရဲ့​ စစ်​ဆေး​မေး​မြန်း​မှုကို ​အောင်မြင်​တော့​မှ ပါရဂူဘွဲ့​ကို ရရှိခဲ့​ခြင်း​ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်း​တော်ကြီး​ဒလိုင်လား​မား​ဟာ သူကြိုး​ပမ်း​လေ့​လာခဲ့​တဲ့​ အသိပညာများ​ကို ဖြန့်​ဝေရင်း​ ကျမ်း​စာအုပ်များ​ ​ရေး​သား​ထုတ်​ဝေခဲ့​တာ အခုဆိုရင် စာအုပ်​ပေါင်း​ ၄၀ ဝန်း​ကျင်ရှိ​နေပါပြီ။ သူ့​ရဲ့​ စာအုပ်များ​ဟာ အ​နောက်တိုင်း​က ဘာသာ​ရေး​ ​လေ့​လာသူများ​နဲ့​ ဗုဒ္ဓစာ​ပေ ပညာရှင်များ​ သာမက နိုင်ငံ​ရေး​သမား​များ​နဲ့​ အနုပညာရှင်များ​ကပါ ​လေး​လေး​နက်နက် ဖတ်ရှုရတဲ့​ စာအုပ်များ​ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာသင်​နေရတဲ့ ​ အချိန်အတွင်း​မှာ ဘုန်း​တော်ကြီး​ ဒလိုင်လား​မား​ဟာ သက်​သောင့်​သက်သာ ​နေထိုင်ရတာ​တော့​ မဟုတ်ပါဘူး​။ သူ့​ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်မှာကတည်း​က တရုတ်နိုင်ငံရဲ့​ ကျူး​ကျော်မှုကို စတင်ခံစား​ခဲ့​ရပါတယ်။
၁၉၅၀ ခုနှစ်မှာ တရုတ်စစ်တပ်က အင်အား​ ၈ ​သောင်း​ရှိတဲ့​ စစ်သား​တွေနဲ့​ တိဗက်ပိုင်နယ်​မြေထဲကျူး​ကျော်ပြီး​ တိဗက်အ​ရှေ့​ပိုင်း​ဒေသကို သိမ်း​ယူလိုက်ပါတယ်။ တိဗက်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့​ အစိတ်အပိုင်း​တရပ်သာ ဖြစ်တဲ့​အတွက် တိဗက်ကို ပြန်လည်သိမ်း​ယူမယ်ဆိုတဲ့​ ခြိမ်း​ခြောက်မှု​တွေကို ခံခဲ့​ရပါတယ်။
ဒီလိုကျူး​ ကျော်မှုကို ငြိမ်း​ချမ်း​စွာ ​ဖြေရှင်း​ဖို့​ ဒလိုင်လား​မား​ဟာ ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှာ ပီကင်း​ကို သွား​ပြီး​ ​မော်စီတုန်း​နဲ့​ ​တွေ့​ပေမယ့်​ မ​ပြေလည်ခဲ့​ပါဘူး​။ တရုတ်အစိုး​ရဟာ တိဗက်​တွေအ​ပေါ် မတရား​အနိုင်ကျင့်​ ​နေခဲ့​တဲ့​အတွက် တိဗက်နိုင်ငံအနှံ့​ တရုတ်ဆန့်​ကျင်​ရေး​လှုပ်ရှား​မှု​တွေ ဖြစ်​နေခဲ့​ပါတယ်။ ဒီလိုက​နေ ၁၉၅၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်မှာ​တော့​ လာဆာမြို့​တော်မှာ လူထုဆန္ဒပြပွဲကြီး​ ဖြစ်ပွား​ခဲ့​ပါတယ်။ တရုတ်စစ်သား​တွေကို တိဗက်က​နေ ထွက်ခွာသွား​ဖို့​ ​တောင်း​ဆိုတဲ့​ သည်လူထုဆန္ဒပြပွဲကြီး​ဟာ တိဗက်သမိုင်း​မှာ အကြီး​ကျယ်ဆုံး​ လူထုအုံကြွမှုကြီး​ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ​ပေမယ့်​ တရုတ်အစိုး​ရက​တော့​ တိဗက်​တွေကို ရက်ရက်စက်စက် နှိမ်နင်း​ပါတယ်။ လူထုဆန္ဒပြပွဲကြီး​ကို အကြမ်း​ဖက်ဖြိုခွဲရာမှာ သုံး​ရက်အတွင်း​ လူ​ပေါင်း​ တ​သောင်း​ခွဲကို သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့​တယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။ ဘုန်း​တော်ကြီး​ ဒလိုင်လား​မား​လည်း​ အဲသည်အချိန်ကစပြီး​ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ​ပြေး​ဝင်ခိုလှုံခဲ့​ရပါ​တော့​တယ်။
ဘုန်း​ တော်ကြီး​ ဒလိုင်လား​မား​နဲ့​အတူ တိဗက်အစိုး​ရလည်း​ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း​ကို ​ပြေး​ဝင်ခိုလှုံခဲ့​သလို တိဗက်နိုင်ငံသား​ပေါင်း​ သိန်း​နဲ့​ချီပြီး​ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း​ကို ​ရွှေ့​ပြောင်း​ ​နေထိုင်ခဲ့​ကြပါတယ်။ တိဗက်နိုင်ငံဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုး​ရရဲ့​ လက်​အောက်ကို ကျ​ရောက် သွား​ပြီး​တဲ့​နောက်မှာ ဘုန်း​တော်ကြီး​ ဒလိုင်လား​မား​အ​နေနဲ့​ တိဗက်နိုင်ငံ လွတ်​မြောက်​ရေး​အတွက် ကြိုး​ပမ်း​ရသလို ပြည်ပ​ရောက် တိဗက်များ​ရဲ့​ ဘဝရပ်တည်​ရေး​အတွက်နဲ့​ တိဗက်ယဉ်​ကျေး​မှုများ​ကို ထိန်း​သိမ်း​ရေး​အတွက်လည်း​ ကူညီ​ဆောင်ရွက်​ပေး​ခဲ့​ရပါတယ်။
တဖက်မှာလည်း​ တိဗက်လွတ်​မြောက်​ရေး​အတွက် ငြိမ်း​ချမ်း​တဲ့​နည်း​တွေနဲ့​ ကြိုး​ပမ်း​ရာမှာ ကုလသမဂ္ဂ အ​ထွေ​ထွေညီလာခံက​နေ ဆုံး​ဖြတ်ချက်​တွေ ချ​ပေး​တဲ့​အထိ ​အောင်မြင်ခဲ့​ပါတယ်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာ​တော့​ တရုတ်အစိုး​ရနဲ့​ ပြဿနာရှင်း​ဖို့​အတွက် အချက် ၅ ချက်ပါတဲ့​ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​အစီအစဉ်တရပ်ကို ​ရေး​ဆွဲခဲ့​ပါတယ်။ သည်အစီအစဉ်ထဲမှာ တိဗက်နိုင်ငံအတွင်း​ လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​နဲ့​ ဒီမိုက​ရေစီပြန်လည်ထွန်း​ကား​ရေး​၊​ တရုတ်တိုင်း​ရင်း​သား​တွေကို တိဗက်​ဒေသထဲ အလုံး​အရင်း​နဲ့​ ​ရွှေ့​ပြောင်း​မှု မလုပ်​ရေး​တွေ ပါဝင်သလို တရုတ်အစိုး​ရက တိဗက်​ဒေသကို နျူကလီယား​စွန့်​ပစ်ပစ္စည်း​တွေထား​ရာ ​နေရာအဖြစ် မသတ်မှတ်ဖို့​လည်း​ ပါဝင်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ​တော့​ တိဗက်ကို လွတ်လပ်တဲ့​နိုင်ငံတခုအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း​က ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်​ရတဲ့​ ဒီမိုကရက်​ဒေသတခုအဖြစ်သာ သတ်မှတ်​ပေး​ဖို့​အထိ ​လျှော့​ပေး​ခဲ့​ပါတယ်။
ဒါ​ပေမယ့်​ တရုတ်အစိုး​ရက​တော့​ ဘုန်း​တော်ကြီး​ဒလိုင်လား​မား​ရဲ့​ ငြိမ်း​ချမ်း​စွာ ​ဖြေရှင်း​ရေး​ကို လက်မခံပါဘူး​။ လွတ်လပ်​ရေး​ကို မ​တောင်း​ဘဲ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်​ရတဲ့​ အထူး​ဒေသတခုအဖြစ်ကိုသာ ​တောင်း​ဆို​ပေမယ့်​ ခွဲထွက်​ရေး​ကို လုပ်​နေတယ်လို့​ တဖက်သတ်စွပ်စွဲရင်း​ ​တွေ့​ဆုံ​ဖြေရှင်း​ရေး​ကို အမြဲ ငြင်း​ဆန်​နေခဲ့​ပါတယ်။
တဖက်မှာလည်း​ တရုတ်အစိုး​ရဟာ တိဗက်​ဒေသက တိဗက်ယဉ်​ကျေး​မှု​တွေကို ဖျက်ဆီး​နေသလို တိဗက် လူမျိုး​တွေကိုလည်း​ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်​နေခဲ့​ပါတယ်။ တရုတ်အစိုး​ရရဲ့​ ဖိနှိပ်မှု​ကြောင့်​ တိဗက်လူမျိုး​ သန်း​နဲ့​ချီ ​သေဆုံး​ခဲ့​ရပြီး​ တိဗက်ယဉ်​ကျေး​မှု ထိန်း​သိမ်း​ရာ ​နေရာ​တွေဖြစ်တဲ့​ ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း​ ​ထောင်​ပေါင်း​များ​စွာ အဖျက်ဆီး​ခံခဲ့​ရပါတယ်။
ဘုန်း​ တော်ကြီး​ ဒလိုင်လား​မား​က​တော့​ တိဗက်လူမျိုး​တွေ လွတ်​မြောက်​ရေး​ကို ဗုဒ္ဓဘာသာလာ တရား​တော်အတိုင်း​ ငြိမ်း​ချမ်း​တဲ့​နည်း​နဲ့​ ဆက်လက်ကြိုး​ပမ်း​နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့်​လည်း​ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ နိုဘယ်လ်ဆုကို ချီး​မြှင့်​ခံခဲ့​ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒလိုင်လား​မား ​ ​ပြောတဲ့​ စကား​တခွန်း​ရှိပါတယ်။ ရှင်သန်ဖို့​ ဘာသာ​ရေး​တခုခုမရှိလည်း​ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ လူအချင်း​ချင်း​ အ​ပေါ်ထား​ရမယ့်​ ​မေတ္တာတရား​ မရှိရင်​တော့​ လူတ​ယောက်အဖြစ် ရှင်သန်လို့​ရမှာ မဟုတ်ဘူး​တဲ့​။
နေပြည်​တော်က ဝန်ထမ်း​များ​ကို အိမ်လခ​ကောက်​တော့​မည်
နေပြည်​တော်က အစိုး​ရပိုင်အ​ဆောက်အဦ​တွေမှာ ဝန်ထမ်း​တွေကို အခမဲ့​နေထိုင်ခွင့်​ပြုထား​ခဲ့​ရာက ဒီလကုန်ကစပြီး​ အိမ်လခ​ကောက်ခံ​တော့​မယ်လို့​ သတင်း​ရရှိပါတယ်။
လစာရဲ့​ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း​ကို အိမ်လခအဖြစ် ​ကောက်ခံမယ်လို့​ ​နေပြည်​တော် ဝန်ထမ်း​က ​ပြောကြာင်း​ ဝန်ထမ်း​တဦး​က ​ပြောပါတယ်။
“အိမ်လခရယ်၊​ ​ရေဖိုး​ရယ်၊​ မီး​ဖိုး​ရယ်ဆိုရင် သူတို့​ လခရဲ့​ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း​ ကုန်လိမ့်​မယ်တဲ့​။ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း​ ဖြတ်မယ်​ပေါ့​။ တကယ့်​တကယ် တွက်ကြည့်​တော့​ ၄ ​သောင်း​ရတဲ့​လူက ၁ ​သောင်း​ကုန်မယ်တဲ့​ အဲဒီလို​ပြောတယ်။ အိမ်လခ​ရော၊​ မီး​ဖိုး​ရော၊​ ​ရေဖိုး​ရောဆိုရင်။”
ဒီကိစ္စကို​မေး​မြန်း​ဖိ့​ သက်ဆိုင်ရာ ​နေပြည်​တော်​ကောင်စီကို ဆက်သွယ်​မေး​မြန်း​လို့​ မရ​သေး​ပါဘူး​။
တပ်မ​တော်အစိုး​ရလက်ထက် ၂၀၀၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာမှာ ကြပ်​ပြေး​ဒေသကို ​ပြောင်း​ရွှေ့​အပြီး​ ​နောက်တ မတ်လကုန်မှာ ​နေပြည်​တော် အုပ်ချုပ်​ရေး​မြို့​တော်အဖြစ် အမည်​ပေး​ပြီး​နောက် ဝန်ထမ်း​တွေကို ဆင့်​ခေါ်ပြီး​ အခမဲ့​ ​နေထိုင်ခွင့်​ပေး​ထား​တာလို့​ သိရပါတယ်။
ဝန်ထမ်း​တွေကို အစိုး​ရက ​နေပြည်​တော်က မြို့​သစ်ရပ်ကွက်​တွေမှာ ​မြေကွက်​တွေ ချ​ပေး​ခဲ့​ပါတယ်။ တပ်ကုန်း​နယ်ဘက်က ဥတ္တရသီရိ၊​ ပုပ္ဗသီရိနဲ့​ လယ်​ဝေး​နယ်ထဲက ဒက္ခိဏသီရိ စတဲ့​မြို့​နယ်သစ်မှာ ဝန်ထမ်း​တွေအတွက် ​မြေကွက်​တွေရိုက်ပြီး​ ​ဝေ​ပေး​ထား​ပါတယ်။
အိမ်ယာအကွက်​တွေကို ဝန်ထမ်း​တွေက ပြန်​ရောင်း​ချင်ရင် အစိုး​ရခွင့်​ပြုချက်ရတာနဲ့​ ​မြေတကွက်ကို ကျပ် ၆ သိန်း​၊​ ​မြေရှင်း​ပြီး​သား​ဆိုရင် ကျပ် ၁၂ သိန်း​၊​ ခြံပါခတ်ပြီး​ဖြစ်ရင် ကျပ်သိန်း​ ၂၀ ထိ ​ပေး​ပြီး​ ဝယ်ယူ​နေသူ​တွေလည်း​ရှိ​နေပြီး​ ဝန်ထမ်း​တွေကလည်း​ ပြန်လည်​ရောင်း​ချ​နေကြတယ်လို့​ ဝန်ထမ်း​က ဆိုပါတယ်။
“အခု ကျ​နော်တို့​ ​နေပြည်​တော်မှာက တ​ယောက်နဲ့​တ​ယောက် ကား​လည်း​ မပြိင်ဘူး​ဗျ။ ​ရွှေလည်း​ မပြိုင်ဘူး​။ ဝိုင်း​ကွက် ဘယ်နှကွက် ရှိတုန်း​လို့​ ပြိုင်တာ။”
ဇမ္ဗူသီရိ၊​ ​ဇေယျာသီရိလို ​နေရာ​တွေမှာ​တော့​ ထိပ်ပိုင်း​အာဏာပိုင်​တွေ ​နေထိုင်သလို ​ဟော်တယ်ဇုန်​တွေ ​ဆောက်လုပ်​နေတာလို့​ဆိုပါတယ်။ ဇမ္ဗူသီရိက ရာဇဌာနီလမ်း​က ​မြေကွက်တခုကို သိန်း​တ​ထောင်ခန့်​ထိ ​ဈေး​ပေး​ဝယ်သွား​တယ်လို့​လည်း​ ဆိုပါတယ်။
နေပြည်​တော်က ​မြေကွက်​တွေကို ​ဈေး​ကြီး​ပေး​ပြီး​ ဝယ်သူ​တွေထဲမှာ ရှမ်း​တရုတ်နွယ် အ​တော်များ​များ​ ပါဝင်တယ်လို့​လည်း​ ဝန်ထမ်း​တွေက ဆိုပါတယ်။
Interview with Noe Noe – အများအတွက် လုပ်တာ …
အများအတွက် လုပ်တာ၊ နေရာရဖို့ ကျော်ကြားဖို့ လုပ်တာမဟုတ်ပါ
နိုးနိုးနှင့် မိုးမခ အင်တာဗျူး။ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၁
ယမန်နေ့က လွတ်လာသည့် နိုးနိုးခေါ် နွဲ့နှင်းရည် သည် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၅ ဦးကျခံနေရသည့်မိသားစုဝင်ထဲတွင် အသက်အငယ်ဆုံး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တဦးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင် အရေးအခင်းတွင် ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုဘက်မှ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည့် အတွက် ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၄နှစ်တာကာလ အကျဉ်းချ ခံရသော်လည်း ယုံကြည်ချက်၊ စိတ်အားထက်သန်မှု ပြောင်းလဲ လျော့ပါးသွားခြင်း မရှိသည်ကို သူနှင့် စကားပြောဆိုသည့်အခါ သိလာရသည်။
မိုးမခ။ ။နိုးနိုးက မိသားစုကြောင့်ပါတာလား ကိုယ်တိုင်ကြောင့်ပါတာလား
ဖြေ။ ။နိုးနိုးစိတ်ကြောင့်ပါ။ နိုးမိသားစုအတွက်ရော ကိုယ့်ဘာသာအတွက်ပါ ဂုဏ်ယူတယ်။ ကိုယ်လုပ်တာ အများအတွက်လုပ်တာ။ နေရာတနေရာရဖို့ နာမည်ကျော်ကြားဖို့ လုပ်တာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ဘာသာဂုဏ်ယူတယ်။ ကိုယ့်မိသားစု တစ်စုလုံးအတွက်လဲ ဂုဏ်ယူတယ်။
မိုးမခ။ ။လူငယ်တယောက်အတွက် ထောင်ထဲမှာ နှစ်အတန်ကြာ အချိန်တွေ ပေးဆပ်ခဲ့ရတော့ ဘယ်လိုခံစားရလဲ။
ဖြေ။ ။နိုးနိုးပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေက ပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုရင် တန်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။ နိုးနိုး အကိုတွေ အမတွေဆို ရှေ့က အများကြီးခံစားခဲ့ရတာပါ။ သူတို့ထက်စာရင်နိုးနိုးက ကောင်းပါတယ်။ နိုးနိုး အတွက်တော့ ကိုယ်မှန်တယ် ကိုယ်လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်တယ်လို့ပဲ ခံယူတယ်။
မိုးမခ။ ။မနိုးနိုးအနေနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောင်ထဲကနေ ဘယ်လိုရင်ဆိုင် မျှော်လင့်ခဲ့သလဲ
ဖြေ။ ။ သူတို့နိုင်မယ်လို့ပဲ မျှော်လင့်တယ်။
မိုးမခ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲပွဲရလဒ်နဲ့ အစိုးရသစ်ကြောင့် အခုလို လွတ်လာတယ်လို့ ထင်မိလား
ဖြေ။ ။ မထင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့နိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေများလို့လေ၊ နိုးနိုးတို့လဲ ထောင်ထဲမှာဆိုရင် အကျဉ်းဦးစီးက ၀န်ထမ်းတွေ ဆိုရင် ဘာထည့် ဘာထည့်ဆို လာပြီးသား။ အချူပ်ကျနေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေဆိုရင်လဲ ဘာထည့်ဆိုတာပါပြီးသား။ သူတို့မှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး ထည့်ရတယ်။ မဲရုံမှာ စောင့်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေက အစ ပြန်ကြားရတယ်။ ဒီလိုမျိူးကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တယ်ဆိုတာ သူတို့ အဖွဲ့အစည်းများလို့နိုင်သွားတာ။ ဒီဟာက ကျတော့ နိုင်ငံတကာကရော အပြင်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ အကိုအမတွေ ကရော တောင်းဆိုလို့သာလွှတ်ပေးလိုက်တာပါ။ မဆိုင်ပါဘူး။
မိုးမခ။ ။ လက်ရှိလှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ် ဘယ်လိုမြင်လဲ
ဖြေ။ ။ လက်ရှိလှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ် ကျေနပ်အားရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခေါင်ဆောင်မှုတွေလဲ ပါတာပေါ့။ အရှေ့ကလုပ်တဲ့လူက လုပ်တယ်၊ အနောက်က လိုက်တယ်လူက မရှိရင် အရှေ့ကလုပ်တဲ့ လူပဲ သွားနေလို့မှ မရတာ ပါဖို့လိုတယ်လေ။
မိုးမခ။ ။ ခုချိန်ခါမှာ အနည်းငယ်လွတ်လပ်လာတဲ့ အပေါ် ဘယ်လို အသုံးချမလဲ
ဖြေ။ ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ အသုံးချရမှာပေါ့။ အခုဆိုရင် ဗျောက်အိုးတွေ ဖောက်နေကြတာကို ကြည့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်းမဲ့တယ် ဖောက်တာက ။ အဲဒါကိုဆိုက်ကားသမားက အဲဒါ ညီးတို့တောင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီလေလို့ ပြောတယ်။ နိုးက အဲဒါ ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူး အဲလိုမျိုးသာ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သူများနိုင်ငံတွေ ပျက်စီးနေတာ ကြာပြီ ။ ဟုတ်တယ်နော် ဒီမိုကရေစီဆိုတာ စနစ်တကျ သုံးရမှာလေ။ ဒီမိုကရေစီဆိုတိုင်း အရာရာတိုင်းမှာ လွတ်လပ်နေဖို့မှ မဟုတ်တာ သူ့စည်းမျဉ်းနဲ့ အညီရှိရမှာပေါ့။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ နားလည်မှ အသုံးချတတ်မှာပေါ့လေ။
မိုးမခ။ ။ ပြည်သူတွေကို ဘယ်လိုနားလည်လဲ
ဖြေ။ ။ ခုဆိုရင်တော့ ပြည်သူတွေကို တော်တော် နားလည်ရခက်တယ်။ သူတို့စိတ်တွေကို သဘောမပေါက်ဘူး ။ထောင်ထဲမှာ တွေ့ခဲ့တာက သာတဲ့ဘက်ကို လိုက်တဲ့လူတွေက များတယ်။ သိပ်ပြီးတော့ အနစ်နာ မခံချင်ကြဘူး။ သူများဦးဆောင်တာပဲ လိုက်ကြတယ်။
မိုးမခ။ ။ ငယ်တော့ အာဏာပိုင်တွေအပေါ်ကို ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိလဲ
ဖြေ။ ။ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ လုပ်ရဲတယ်ပေါ့။အဲလို ငယ်တဲ့အနေနဲ့ လုပ်လို့ အပြစ်တင်တဲ့ပုံစံပြောတာတော့ နည်းပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်း ညွှန်မှူးလာတုန်းကတော့ ဘယ်လိုကြောင့် ပါလာတာလဲ မေးတယ်။ နောက် စာများများ ဖတ်စေချင်တယ်တဲ့။ စာဖတ်တဲ့အတွက် လမ်းမှား မရောက်စေချင်ဘူးလို့ ပြောသွားတယ်။
မိုးမခ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာတွေလိုအပ်နေတာမြင်လဲ
ဖြေ။ ။နိုးနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးကတော့ အကျဉ်းသားကိစ္စပေါ့။ အထက်ကဘာပဲလုပ်ပေး လုပ်ပေး အောက်ခြေမှာ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ အကျဉ်းသားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေ အပြည့်အ၀မရရှိသေးတာ။ အဲဒါလေးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ် လုပ်စေချင်တယ်။
သမီးလာတောင်းတာမပေးဘူးဆိုတော့မိန်းမနဲ့ အစားပေး ဆိုသလိုတော့ ဖြစ်ကုန်ပြီ။
by လှိုင် ဘွား on Thursday, October 13, 2011 at 11:28am
သည် နေဇော်လတ်ဆိုတဲ့ ငနှဲက လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဇော်မင်း လေသံအချိုးမျိုး ချိုးလာပြန်ပြီ -
အဲသည် ကျောက်ဖြူ ကူမင်း (ယူနန်) ဓါတ်ငွေ့ ရေနံ ရထားလမ်း ကမှ - မြန်မာပြည်ကို ဓါးလွယ်ကုတ် ဓါးနဲ့ ပိုင်းသလိုပိုင်းပြီးသတ်မှာ။ တောက် -
သမတ အကြံပေးဆိုတဲ့ ငနှဲတွေ - အစိုးရဆိုတာ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ မြေပေါ်မြေအောက် ရေပေါ်ရေအောက်
နိုင်ငံခြားထွက်ပြီးကျွန်ခံနေရတာကိုအခွန်ကောက်တဲ့ အဆင့်ပဲလားကွ။ တိုင်းပြည်အတွက် မိမိမှာရှိတာတွေကိုထိမ်းသိမ်းပြီးကုန်ချောဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ Intellectual Properties ပိုင်ဆိုင်ဖို့ အတွက်
ပညာရှင်တွေမွေးထုတ်ဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေး ကိုအစွမ်းကုန်မြင့်တင်ဖို့ ဘာစီမံကိန်း ဘာအသံမှ
ထွက်လာတာမကြားရဘူး။ တဆိတ်ရှိရင် - ရှိသမျှ အသားတင်ချရောင်းဖို့ ချည်းပဲ စဉ်းစားနေတာ
အစိုးရအလုပ်ပဲလားကွ - တောက်
လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်သုံးဆယ်က Australia Parliament ထဲမှာ "ငါတို့ Australians တွေ ဂျပန်ကိုသံရိုင်း
တွေရောင်းပြီး ဂျပန်ကကားပြန်ဝယ်စီးနေတာ မရှက်ကြဖူးလား" ဆိုတဲ့အသံတခုကြောင့်
Australians တွေကားထုတ်ဖို့ စခဲ့ကြတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ ရှိသမျှ ရေနံ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တွေအကုန်
ရောင်းပြီး အန္ဒိယကနေ ဒီဇယ်ပြန်ဝယ်တဲ့ သန်းရွှေလုပ်နည်းအတိုင်း ဆိူရင်တော့ တိုင်းပြည်က
ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ -ါ နိုင်ငံဖြစ်မှာပဲ။ ဖီလစ်ပိုင်လို ပြည်သူ (၁၂) သန်းလောက်ပြည်ပထွက်ပြီးကျွန်ခံ
ရတဲ့ဘ၀ရောက်သွားမယ်။ အဲသည်သမတအကြံပေးဆိုတဲ့ ငနှဲတွေ မင်းတို့ သင်ခဲ့တဲ့ပညာတွေထဲမှာ
Sustainable Development တို့Comparative Advantage တို့ အခြေခံတောင်
သင်မလာဘူးဖူးလားကွ။ တိုင်းပြည်မှာ ရာစုနှစ်ထက်ဝက်နီးပါး ဖြစ်လာတဲ့ နာတာရှည်ရောဂါကို
တရုတ်ဖရောင်းကျက်နဲ့ ကပ်ပြီး အန္ဒိယဆာလီနဲ့ ပတ်တီးစီးမယ်ဆိုရင်တော့ အနူအ၀ဲရုပ်ပေါက်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/13/2011 1 အကြံပြုခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လူငယ်တွေကို အားကိုး
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အရေးအတွက်လူငယ်တွေကိုအားထားကြောင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်
NLD ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦးနဲ့ ဦးဝင်းတင်တို့ကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းတွေက ဂါရဝပြုကန်တော့ပွဲမှာ အဲဒီလို ပြောကြားလိုက်တာပါ။ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဘ၀ရဲ့ ဆုံးမ သြ၀ါဒတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ခံယူနိုင်ဖို့ အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သွန်သင်ဆုံးမ တတ်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အနစ်နာခံ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်လူရွယ်အားလုံးကို သူ့အနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း နဲ့ လူကြီးလူငယ်အပြန်အလှန် နားလည်ပြီး ကျေးဇူးတရား သိတတ်တဲ့ လူကောင်းလူတော်တွေ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပြောကြားချက် အပြည့်အစုံကို ဒေါ်ခင်ခင်အိ စုစည်းတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်။ အသံဖိုင်ယူရန်။
Statements from Canada Foreign Minister on release...
ပြည်ပ သီးလေးသီးအဖွဲ့ ဇာဂနာနှင့် တိုင်ပင်ပြီး ပြည်ေ...
ထိုင်း​ရောက် မြန်မာအလုပ်သမား​နှစ်သန်း​ မှတ်ပုံတင်​...
လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​တိုက်ပွဲဝင် ဘုန်း​တော်ကြီး​ ဒလိုင...
သမီးလာတောင်းတာမပေးဘူးဆိုတော့မိန်းမနဲ့ အစားပေး ဆု...